Ngexesha lenkqubo ye- imveliso yezichumiso zezinto eziphilayo, kukho isixhobo esibaluleke kakhulu esidlala indima ebalulekileyo kwindawo yokubola yenkunkuma yendalo- umatshini wokujika umquba, besinokwazisa ngolwazi olusisiseko malunga nokujika komgquba, kubandakanya imisebenzi yayo, iintlobo kunye nendlela yokukhetha efanelekileyo.
Umsebenzi wokujika komgquba
Ukujika komgquba kuye kwaba sisixhobo esiphambili sokwenza i-aerobic composting ngenxa yeziphumo ezibalulekileyo zomgquba kunye nokubila.
♦ Umsebenzi wokuxuba ukufakwa kwempahla eluhlaza: ekufakeni umgquba, kufuneka kongezwe isithako esincinci ukuze kulungiswe umlinganiselo wekhabhoni ye-nitrogen, ixabiso le-pH kunye nomxholo wamanzi ekrwada. Izinto ezingafunekiyo eziphambili kunye nezinto ezincinci ezidityanisiweyo zingadityaniswa ngokufanayo ngumgquba oguqukayo wobushushu.
Just Lungisa ubushushu beemfumba zempahla eluhlaza: ngexesha lokusebenza, umgquba ujike ungenza izinto ezingafunekiyo zinxibelelane ngokupheleleyo kwaye zixubeke nomoya, onokuthi ulungelelanise ubushushu beemfumba ngokufanelekileyo. Umoya unceda ii-microorganism ze-aerobic ukuvelisa ubushushu bokubila, ubushushu be-pile bukhuphuka. Ngeli xesha, ukuba ingqumba yeqondo lobushushu liphezulu, ukujika kwemfumba kungazisa ukubonelelwa komoya omtsha, onokuthi wehlise iqondo lobushushu. Kwaye iintsholongwane ezahlukeneyo eziyingenelo ziyakhula kwaye zizale kuluhlu lwamaqondo obushushu.
♦ Ukuphucula ukugcwala kwemfumba yezixhobo: inkqubo yokwenza umgquba inokuyityumza intonga kunye nokwenza izinto ezingafunekiyo zibe zincinci, zenze ukuba iimfumba zibe bhetyebhetye, zolule kwaye zibe neporosity efanelekileyo, ebingumgangatho obalulekileyo wokulinganisa ukusebenza komgquba ujike.
♦ Ukulungisa ukufuma kwezinto eziyimfumba yezixhobo: Umxholo wamanzi ekrwada wezinto zokubila kufuneka ulawulwe ngaphakathi kwe-55%. Ekubiliseni, impendulo yezinto eziphilayo iya kuvelisa umswakama omtsha, kunye nokusetyenziswa kwee-microorganisms kwizinto ezibonakalayo kuya kwenza ukuba umswakama ulahlekelwe ngumthwali kwaye ukhululeke. Ke ngoko, ngonciphiso olufike ngexesha lokufuma kwinkqubo yokubila, ukongeza kukonyuka kolophu olwenziwe kukuqhutywa kobushushu, ukujika kwezinto ezingafunekiyoUmatshini wokujika umquba iya kwenza umphunga onyanzelekileyo womphunga wamanzi.
Izing Ukuqonda iimfuno ezizodwa zenkqubo yokwenza umgquba: umzekelo, umjikelo ujike banokuziqonda iimfuno zokutyumza izinto zokwenza izinto kunye nokujika okuqhubekayo.
Umatshini wokufaka umgquba wenza ukubila kube lula, imijikelezo emifutshane kwaye ifezekise ulindelo. Ezi zilandelayo ziimishini eziqhelekileyo zokuguqula umquba.
TI-ypes ye-compost Turner
Ityathanga leplate yomgquba ujike
Olu luhlu lokujika komgquba luyilelwe kakuhle, ikhonkco lisebenzisa umgangatho ophezulu kunye neenxalenye ezizinzileyo. Inkqubo yeHydraulic isetyenziselwa ukuphakamisa nokuthoba, kwaye ubunzulu bengeniso bunokufikelela kwiimitha eziyi-1.8-3. Ukuphakama kokuphakama kwezinto ezibonakalayo kunokufikelela kwiimitha ezimbini. It
unokwenza umsebenzi wokujika ngokukhawuleza, ngempumelelo ngakumbi kunye nokusetyenziswa okongeziweyo. Ngeempawu zoyilo olumbeneyo, ukusebenza ngokulula kunye nokugcina indawo yokusebenza, lo matshini wokugalela umgquba unokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwimimandla eyahlukeneyo yezinto ezahlukeneyo, ezinje ngomgquba wemfuyo, udaka lwasekhaya, inkunkuma yokutya, inkunkuma yezolimo kunye nokunye.
Uhlobo lweGroove Turner
Yamkela ikhonkco lokuqhuba kunye nokuqengqeleka kwesakhiwo seplate yentsimbi enokumelana okuncinci, ukugcina amandla kwaye kufanelekile ekusebenzeni komgquba onzulu. Ngaphandle koko, inamandla okutyhoboza kwaye imfumba yezixhobo ineziphumo ezilungileyo zokugcwaliswa kweoksijini. Ukuhamba kwayo ngokuthe nkqo nangokuthe nkqo kuyakuqonda ukusebenza kokujika nakweyiphi na indawo kwindawo yomjelo, eguqukayo. Kodwa ikwanomda wokuba inokusebenza kuphela kwitanki yokubila, ke ngoko ukhetha le nto inye yokwakha itanki yokuvundisa ehambelana nayo.
Uhlobo lwe-Crawler Turner
Oku Uhlobo lomkhangeli ojikelezayo ojikajika izixhobo eziyilelwe ngokukodwa ukwenza umgquba ngefestile kunye netekhnoloji yokuvundisa ukuvelisa isichumisi. Ayifanelanga kuphela indawo evulekileyo yangaphandle, kodwa ikwindawo yokusebenzela kunye negreenhouse. Inokulungelelanisa okunamandla, ukusebenza okukhuselekileyo nokuthembekileyo, kunye nokugcinwa okufanelekileyo. Ngokomgaqo wokuvubela i-aerobic, lo matshini ubonelela ngendawo eyoneleyo ye-zymogeneous bacteria ukuba ingadlala indima yayo.
Uhlobo lwevili I-Compost Turner
Uhlobo lwevili lokuGaya umGquba weTurner sisixhobo esizenzekelayo sokufaka umgquba kunye nokuvundisa ngobude obude kunye nobunzulu bemanyolo yemfuyo, udaka kunye nodoti, udaka lokuhluza, amakhekhe asezantsi e-slag kunye ne-sawdust ye-mills, kwaye ikwasetyenziswa ngokubanzi ekuvundiseni nasekupheliseni amanzi emzimbeni izityalo zezichumiso eziphilayo, izityalo ezichumileyo, iifektri zamdaka kunye nenkunkuma, iifama zegadi kunye nezityalo zebismuth.
Iingcebiso zokukhetha umgquba ujike
Nokuba ungena kwimarike, okanye unamava ngomgquba, imibuzo ihlala ivela malunga nokuba loluphi uhlobo lomjikelo wokujika komgquba oza kulungela iimfuno zakho kunye nomgca osezantsi. Ukukhetha kuya kuncipha kakhulu emva kokujonga izinto, iimeko kunye neenjongo zomgquba.
Xa uthenga, qinisekisa ukuba izixhobo zikhuselekile kwaye zithembekile.
Ukugqitywa kokujika komgquba othile kugqitywa sisantya sokuhamba kwayo kunye nobungakanani bewindows enokuthi ibambe.
● Khetha ukujika komgquba ngokweemfumba zezixhobo kunye nokujika kwezinto. Oomatshini abakhulu nabanamandla ngakumbi ngokubanzi banamaqondo okuphuma aphezulu kuba bacwangcisa izinto ezinkulu zokwenza izinto.
● Qwalasela kwakhona isidingo sendawo Umgquba ujike ngomatshinie. Uhlobo lokugaqa lomgquba ujike uza kufuna indawo encinci yezitulo kunye nezinye iimodeli.
● Iindleko nohlahlo-lwabiwo mali, ewe, ziyachaphazela nokukhethwa kwezixhobo zokugalela umgquba. Umatshini onokuhamba okukhulu kunye nomthamo uya kuba namaxabiso aphezulu, ke khetha efanelekileyo.
Ngamafutshane, ngawo onke amaxesha, ungaphendula nge-US.